Budata MD-88 Delta Twin Pack FSX & P3D - Rikoooo
downloads 75 213
Model / VC nke Mitsushi Yutaka (ex POSKY). Native FSX/P3D ntụgharị na ngwugwu nke Rikoooo. Ogwe 2D nke Marco Spada dere
Ọ bụ site n'ikike Mitsushi Yutaka (ex POSKY) ka Rikoooo tụgharịrị add-on maka FS2004 ka nwaafo FSX / P3Dusoro v4. Ekele maka ngwanrọ 3DS Max na MCX anyị tinyegogo na ihe ọ includingụCụ gụnyere FMC (Honeywell), mmezi nke 2D Panel yana njikọ zuru oke nke 3D kokpiiti mebere.
Ihe ngwugwu a gunyere usoro MD-81/83 na 88 nke na-ebi ndu 17 tinyere ezigbo alfa-channelụ (ntụgharị). Ezigbo ụda sitere na injin Pratt & Whitney JT8D, pipụ kwalite ogo 360, kọmpụta 2D nke Marco Spada mepụtara, ụdị ụgbọ elu dị oke mma nke nwere autopilot nke ọma, ọkụ nwere ọnọdụ ọma, yana mmetụta anwụrụ ọkụ.
Anyị na-atụ aro ife ụgbọ elu a na ọnọdụ 2D Panel n'ihi na VC mara mma karịa ihe bara uru.
Gụọ akwụkwọ maka ozi ndị ọzọ.
Udiri: Delta ụgbọ elu - American ụgbọ elu - Ndokwa - Aero Mexico - Aero Mexico AMS - Aero Republica - Avianca - Alitalia - TWA - Northwest - Orient Thai - GMG - Royal Jordanian - Iberia: Stephen browning - Delta Airlines 1999 - Series Star Alliance - Scandinavian Airlinesgbọ elu.
The McDonnell Douglas MD-80 bụ ụgbọ elu ndị America nke ndị ụgbọ elu ahụ rụpụtara McDonnell Douglas. Nke ikpeazụ ahụ mepụtara ma zụọ ahịa mgbanwe, MD-90. Mgbe ịzụta McDonnell Douglas na 1997, Boeing kwalite ụgbọ elu ahụ, n'okpuru aha Boeing 717
Onye edemede: Model / VC nke Mitsushi Yutaka (ex POSKY). Native FSX/P3D ntụgharị na ngwugwu nke Rikoooo. Ogwe 2D nke Marco Spada dere